Iintlobo ezingama-20 zezihlahla ezihlala zihlaza kunye nezihlahla ezivela kwintsapho yama-agave ziyi-cordillin genus. Nangona kunjalo, okwangoku, ezi ziintlobo zezityalo zihlelwa njengeDrachen. Ngokuqhelekileyo zivela kwiindawo ezisemathonjeni kunye nama-tropical e-Australia, Asia, Afrika kunye neMzantsi Melika.
Igama elithi cordillin lithathwe kwigama elithi cordylle, elithetha ngesiGrike lithetha "inqabileyo", "i-nodule". Eli gama linikezelwa kwi-genus ngenxa yeengcambu zaso, izimpande ezivuvukileyo, eziyimpawu zezityalo ezininzi zentsapho. I-Cordillin inokukhula ngendlela ye-shrub, isiqingatha-shrub okanye umthi. Ezi zityalo zihlukaniswe yinyama, ezimhlophe kwi-rhizome esinqunyiwe. I-Lancet kunye ne-xiphoid amaqabunga e-cordillins yakha isithsaba esininzi, esinezinwele. Inzululwazi, le ntsholongwane ibizwa ngokuba yi-panicle. Iintyatyambo ze-cordillins zihle kakhulu-ezimhlophe, ezibomvu okanye i-lilac, ngasinye saso senza i-ovary ezintathu.
Ngokuqhelekileyo i-cordolin ingadideka ne-dracene. Kodwa zinempawu eziphawulekayo: umzekelo, ii-cordillins zineengcambu ezimhlophe kwi-cut, kwaye kwi-dracaena ziya kuba ziluhlaza okwesibhakabhaka. I-Cordillins, ngokungafani ne-dracen, inika iinkqubo zengcambu.
Ngokuxhomekeka kwiintlobo, i-cordillins ingakhula emagumbini amabini afudumele kwaye afudumele. Nangona kunjalo, ekubeni iintlobo ezahlukeneyo ze-cordillins zikhula kwiimeko ezahlukeneyo ze-climatic, iimeko zokulondolozwa kwazo zikwahlukana.
Ekhaya, izityalo zendlu i-cordillin zikhula zifike kumitha eyi-1.5 ngokuphakama, kwaye ngokuqhelekileyo zenziwe njengomthi onomthi onqabileyo. Emva kwexesha, i-cordillin iba njengomthi wesundu, njengoko amaqabunga ayo aphantsi afa kwaye awa, eveza i-trunk. UCorllllina uyathandwa kakhulu ngenxa yamagqabi ayo ahlobisa. Ininzi i-cordillins ikhula ngokukhawuleza, kodwa ezinye iintlobo zezi zityalo (umzekelo, i-cordillina ezantsi) zinokukhula ngamamitha amaninzi ngokuphakama. Imithi enjalo yokuhlobisa inokufumaneka kuphela kwiindawo zokugcina izityalo kunye negadi yezityalo.
I-Cordilina - izityalo ezithanda ukukhanya okukhanyayo, kodwa musa ukunyamezela ukukhanya kwelanga, ngoko bazama ukuthatha i-pritenit. Iintlobo ze-Shadow-leafy zithathwa njengomthunzi. Ziyakwazi ukufakwa apho kungekho ukukhanya okukhulu.
Iqondo lokushisa eliphezulu le-cordole ehlobo li malunga ne-20 ... ama-degrees ama-25. Ukushisa kwegumbi ngexesha lobusika kwiintlobo ezahlukeneyo ze-cordillins kuya kuhluka. Ngoko, umzekelo, i-cordillin, ekhulayo kwiindawo ezisezantsi, ikhetha ukushisa okupholileyo-malunga ne-5 ... i-degrees ezili-10. I-cordillin ye-tropical, i-thermophilic ephezulu, ikhetha ukushisa okungenani kwi-degrees 18. Kwakhona, i-cordillin ayifanele ifakwe kwiidrafti.
I-cordillins idinga ukuthambisa rhoqo, ngexesha lehlobo lasehlobo-mali kufuneka libe lincinci ngakumbi. Ungasebenzisi amanzi onzima wokunkcenkceshela, kuba akunakwenzeka ukuzalisa isityalo. Ebusika, ukuthambisa kufuneka kube ngokulinganayo, ngelixa ukujonga umthamo womnquba womhlaba ukuphepha ukuma. Ngokulumkisa ngokugqithiseleyo, kuyimfuneko ukuhambisa amanzi i-cordolin ebusika ukuba igcinwe kwigumbi elipholileyo.
Imeko ebaluleke ngokufanayo ye-cordole yomswakama womoya, ngakumbi xa kuthethwa iintlobo zezolimo. Ehlobo, kudinga ukutshiza okuphambili, kodwa amanzi akufanele abe nzima. Ebusika, izityalo kufuneka zigcinwe kude nama-radiators.
Amanzi anokubangela ukubola kwiindawo apho ukhula lukhula khona, ngoko ukucoca nokucoca kufuneka kwenziwe ngokuqaphela okukhulu.
Ngethuba lezityalo ezinomdla (ehlotyeni nasentwasahlobo), isityalo kufuneka sizaliswe kanye emva kweentsuku ezi-7. Umanyolo kufuneka ube nzima kwizityalo ezinqabileyo. Ebusika, ukutya kufuneka kungabi ncinane - malunga nanye emva kweentsuku ezingama-30-40.
Izityalo zeCorllllin azidingi ukutshintshwa ngokuphindaphindiweyo, okwaneleyo ngonyaka. Yonke iminyaka 2-3 izityalo zityalwe, ukususela ngeli xesha zikhula kakhulu. Ithuba elihle lokutshintshwa kwintwasahlobo. Kufuneka silungiselele umhlaba wokutshintshwa kwesityalo: 1 inxalenye ye-humus nesihlabathi kunye neengxenye ezintathu zomhlaba wegadi.
Kwiikarinali ezikhulile kwiimeko zezindlu, iintyatyambo zingabonakala zingabonakali.
Ezi ntlobo zivelisa ngokucoca okanye imbewu, ngamanye amaxesha i-rhizomes.
Imbewu ityalwe ekuqaleni kukaMatshi. Umhlaba kufuneka ube ne-1 inxalenye yomhlaba we-turf kunye nenxalenye yesihlabathi. Phantse inyanga kamva, amahlumela okuqala aya kuvela, kodwa ubude bemizuzu yokuhluma kwembewu malunga neenyanga ezi-2-3. Nangona kunjalo, ngale ndlela, kuphela iifom zokuqala ezazisasazekayo, kwaye iintlobo ze-varietal zingcono zisasazwa kuphela ngokusondeza izityalo.
Ukuhluma ukuvelisa ukusetyenziswa kusetyenziswe i-lignified kancane. Izicucu zokuvelisa ziza kuthathwa zombini ukusuka phezulu kweso sityalo, kwaye zivela kwinqanaba eliphakathi kwesiqu. Iinqwelo zityalwe kumhlaba olungiselelwe owenziwe ngesanti, i-peat kunye neqabunga lomhlaba, ngo-1: 1: 1. Okanye unokutsalwa kwisanti. Ukuhluthwa kwe-cuttings, ukushisa okwaneleyo (25-30 degrees) kuyadingeka. Ukunyamekela amahlumela amancinci ukuthambisa okuchanekileyo kunye nokutshiza. Kuthatha malunga neenyanga ukugxila izicucu, emva koko isityalo sityalwe ebhodweni. Ukugqiba izityalo ezincinci zityalwe kwisigcawu ngokulingana okulingana kweqabunga (humus) umhlaba, kwi-turf, peat nesihlabathi. Ezinye izityalo zabantu abadala zifakelwa emhlabathini oqulethwe ngumgquba womhlaba, i-humus nesihlabathi kwiindawo ezilinganayo.
Zonke iindidi ze-cordillins zingahanjiswa ngokuhlukanisa i-rhizome, apho zonke iingcambu kufuneka zisuswe ngaphambili. Le nkqubo yenzeke entwasahlobo. Ii-rhizomes zityalwa kwindawo efanayo yomhlaba njengoko zilungiselelwe izicucu. Emva kokuhluma, batyalwe ngomhlaba oqhelekileyo olufanelekileyo kulolu hlobo lwesityalo.
Kwamaqabunga, amabala omdaka angabonakala, ukuba akukho mfuyo okwaneleyo.
Ukuba izityalo zakho ziwa ngamaqabunga, ungakhathazeki, ushiye amaqabunga - kungokwemvelo kwi-cordillins.
Ukucwiliswa ngokweqile kunokubangela ukubola kwesigxina kwisiseko; kwisityalo esinjalo kufuneka unqunyulwe ngokukhawuleza phezulu kwaye uyiqande.
Ukuba ukukhanya kukhanya kakhulu, kukho amathuba okukhanya okubonakalayo kumaqabunga.
Ukuba amaqabunga esi sityalo ayancipha kwaye ajikeleze, iqondo lokushisa liphantsi kakhulu.
Ukuba kukho ukungcola okwaneleyo kwigumbi, amaqabunga, oko kukuthi imida, ingaba mnyama.
Kwii-cordillins, ezi zinambuzane ziloyiko: i-spider mite, i-mealybug, i-whitefly.
Tetrastigma vuain (iidiya zangaphakathi)
Intendelezo yasekhaya yase-Areques
Indlela yokukhulisa indoda yangempela kumntwana okhula ngaphandle kobawo
Amaqanda atsiweyo eTurkey
I-Aqua aerobics yabasetyhini abaphakathi
UGrace Kelly: Ibali leNkosana
I-scones edibeneyo nemifuno
Inkqubo yokutya okunempilo kubantwana
Ukuboleka imali nokuboleka imali
URomy Schneider - ngowona mfazi uhle kakhulu wekhulu lama-20
Jabulela iintyatyambo zakho ngokugqoka "okulungileyo"